एजेन्सी । अमेरिकाको पहिलो मिलिनेयर एस्टर परिवारका सदस्यहरु कसैले होटल बनाउन स्ुरु गरे, कोही ब्रिटिश राजनीतिज्ञ बने र कसैको टाइटानिक जहाजमा मृत्यु भयो ।
पुरुषका लागि सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्यको कुराः गुलामी गर्नु
दुई वटा उसिनेको अण्डाको मूल्य सत्र सय ! ट्वीटरमा प्रश्न : हात्तीकै अण्डा थियाे र ?
मुम्बई (एजेन्सी) । सामान्य अवस्थामा तपाईं दुई वटा उसिनेको अण्डाको मूल्य कति पर्ला भनेर अनुमान गर्नुहुन्छ ? तीस, चालीस अथवा पचास रुपैयाँ ?